Wararka Maanta: Arbaco, Aug 22, 2018-Al-shabaab oo dhoola-tus ku soo bandhiggay dareyska militeri-ga Soomaaliya
Tuutaha ay soo bandhiggeen Al-shabaab ee lagu baahiyay baraha bulshada ayaa dareyskii ugu danbeeyay ee loo qeybiyay guutada 14ka Oktoobar oo la sameeyey wixii ka dambeeyey qaraxii bishii October ee sanadkan ka dhacay Isgoyska Zoobe.
Dhoola-tuska waxaa kaloo ku jiray gaadiid leh astaamaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida ka muuqatay sawirro lagu baahiyay baraha bulshadu ku wada xiriiraan.
Gen Maxamed Nuur Galaal oo ah khabiir dhinaca ciidamada ah kana tirsan saraakiishii hore ee militer-ga Soomaaliya oo u waramay BBC-da ayaa sheegay in arintan ay ku iman karto labo sababood.
Al-shabaab ayaa marar badan oo hore weeraro qorsheysan ku qaaday xarumo amaankooda siweyn loo ilaaliyo, inta badanna kooxaha weerarkaas geysta ayaa la arkaa iyaga oo ku labisan dareyska ciidamada dowladda xitaa qaarkood waxaa ay sitaan kaaraar aqoonsiga ciidan-nimo kuwaa kuwaa oo la rumeysan yahay in dhamaan-tood qeyb ka qaataan in Al-shabaab si sahlan u galaan xarumaha dowladda.
Gen Galaal ayaa sidoo kale sheegay in Al-shabaaab marar badan oo hore agab militari oo dareysku ka mid yahay ka furteen xarumo ciidan oo ay weerarreen taasoo xitaa qeyb ka ah in ay si fudud ku hellaan dareyska.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalintii shalay salaada Ciida kala qeyb-galay cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay Al-shabaab iyo kooxaha kale ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya shisheeya wadanka ku soo duulay.
Dhoola-tuskan oo u muuqday mid ku tala-gal ah ayaa ugu yaraan fariin u diraya madaxda ugu sareysa dalka oo siweyn ula tacaalaya wax ka qabashada Amniga, gaar ahaan in Al-shabaab u gudbaan hub-ka iyo saanada militeri ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.